Beekeeping | January 2020
Miyuu cunaa malab malab ah, sida loo heli karo malab laga bilaabo guriga macaan
Malabaha Honeycomb waa badeeco dabiici ah, taas oo ay sabab u tahay carafka ubaxa iyo dhadhanka aan caadiga ahayn, waxaa si fudud loo buuxiyaa niyadda xagaaga. Laga soo bilaabo waqtigeedii, malabyo shinni ah ayaa loo tixgeliyaa badeecad aad u qiimo badan oo wax soo saarka shinni ah, laakiin ma aha in qof kastaa ogyahay waxa faa'iido badan u leh malabku?
Waa maxay doorka darawalada ee gumeysiga shinnida
Wixii dad ah oo ka warqabta kaydinta dhirta adigoo maqlaya, way adagtahay in la fahmo waxa ay tahay diyaaradda iyo sababta loo baahan yahay in xayawaanka shinnida ah. Dad badan ayaa ogyahay dhinaca xun ee jiritaanka jiritaanka: duunistu waxba kama qabanayso rugta, laakiin waxay cuntaa shan. Si kastaba ha noqotee, xayndaab kasta, dabiicigu wuxuu ku siinayaa jiritaanka shakhsiyaad tiro badan.
Qeexida noocyada caadiga ah ee malab
Waxaan ka ogaan karnaa carruurnimada in malabku yahay mid dhadhan fiican leh oo caafimaad leh. Maanta suuqa ayaa na siinaya tiro badan oo kala duwan oo ah malab. Nasiib darro, nasiib darro, waxay soo baxaan iyo been-abuurka. Si aad u sameyso iibsashada tayada iyo in aanad waxyeeleynin caafimaadkaaga, waxaa muhiim ah inaad ogaato nooca malab ee ay tahay iyo waxyaabaha ay leedahay.
Sida loo daryeelo vatochnik: aasaasiga ah ee sii kordhaya beertaada
Asclepias, ama, sida loo yaqaanno, vatochnik waa geedo digaag ah ama geed dhir ah oo dhererkiisu ka hooseeyo 0.5 illaa 1.5 m, kaas oo loo tixgelinayo in uu yahay goobta lagu magacaabo Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika. Uterusku wuxuu leeyahay xidid adag oo adag, dhererka toosan. Caleemaha waaweyn ee lanceolate waxay ku yaalliin meel u dhow ama dhaadheer.
Sharaxaad ka mid ah jilicsanaanta beeska iyo faraqa u dhexeeya iyaga
Haddii riyadaadu tahay mid udub dhexaad u ah, markaa marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxa dabiiciga ah ee jiraa iyo waxa ay yihiin faraqa u dhexeeya iyaga. Xayawaan kasta waxaa lagu kala soocaa waxqabadka, dabeecadda, iska caabinta barafka, iyo sidoo kale muuqaalka. Ilaa hadda, adduunka oo dhan waxaad tirin kartaa laba nooc oo shinni ah.
Malab Bacal: maxay tahay isticmaalka, sida loo doorto, loo kaydiyo iyo waxyeelo suuragal ah
Wax qarsoodi ah maaha, taas oo ku xidhan dhirta ay ka mid yihiin shinni urta nectar, dhadhanka iyo faa'iidooyinka malabku way kala duwan yihiin. Maanta waxaan ka hadli doonaa qiimaha ugu qiimaha badan - malab baqdi ah. Si aad u hesho malab baqti, shinni waa in ay soo ururiyaan nectar gaar ahaan ka soo ubax ubax, taas oo, sida aad qiyaastay, waxay na siinaysaa buckwheat.
Ka hor intaanad bilaabin inaad abuurto apiary, bilawga bilawga ah waa in ay aasaasiga u bartaan aasaasiga ah shinnida. Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay talooyin aasaasi ah oo loogu talagalay beekhaarka bilawga ah: meesha laga bilaabo, sida loo doorto shinni, nooca qalalka, daryeelka saxda ah, iyo waxyaabo kaloo badan. Astaamaha aasaasiga ah ee shinnida, waxaad u baahan tahay inaad hore u ogaatid dhamaantood.
Daroogada "Bipin" loogu talagalay beeska: qiyaasaha iyo habka maamulka
Ka shaqeynta shinni ka soo sax ah waa dhacdo lagama maarmaanka u ah dhammaan beero-wadaagga. Mararka qaar nolosha qoysaska oo dhan bees waxay ku xiran tahay, ka dibna daroogada "Bipin" waxay u timaadaa caawin, oo ay ku jiraan amitraz. "Bipin": Faahfaahinta, halabuurka iyo foomka sii deynta daroogada Amitraz, oo ah qaybta ugu weyn ee firfircoon ee "Bipin", waa daawo loogu talagalay in lagu dagaallamo jiritaanka xoolaha.
Calaamadaha iyo habka isticmaalka daroogada "Apira"
In kaydsiga shinnida, daroogooyinka kala duwan ayaa badanaa loo isticmaalaa si loo kordhiyo tirada shakhsiyaadka iyo roogga ee apiary. Maanta ka fikir midkood - daroogada "Apira". Noocyada, foomka sii deynta, macluumaadka guud "Apira" - daroogo fududeynaya qabashada xayawaanka inta lagu guda jiro dillaaca. Ku duubnaa dhalooyinka khafiifka ah ee balaastig ah oo 25 g ah, waa jelit cad.
Beehive do-adiga-naftaada: sifooyinka guri sameynta shinni
Bees waxaa loo isticmaalaa in lagu qariyo guryahooda hollo ama tufaax cufan oo geedo ah. Sidaa daraadeed, si ay cayayaanka si dhakhso ah uula qabsadaan jawi cusub, beeraleyda qibrada leh waxay isku dayayaan in ay abuuraan xaalado aan fiicnayn ee bees si ay u abuuraan ayna abuuraan malab delicious ah. Maqaalkan, waxaad baran doontaa sida loo abuuro rugta gacmahaaga, waa maxay waxyaabaha ugu fiican ee hoyga shinnida iyo ikhtiyaarrada loogu talagalay habeynta.
Sida loo karsado guriga iyo waxa aad u baahan tahay inaad sameyso
Mead - cabbitaan lagu yaqaan dadka tan iyo wakhtiyadii Ruushkii hore. Waxaa la diyaariyay awoowayaasheenna, maantana ma aysan luminin sumcaddeedii. Hadda waxaad si fudud u iibsan kartaa cabitaan dukaanka, laakiin naga mid ah waxaa jira dad badan oo jecel guryaha dhadhanka dhabta ah. Daqiiqada ah ee karinta macaan, xayawaanka kaas oo hoos ku qoran, ayaa kuu sheegi doona maqaalkan, sidoo kale waxaad baran doontaa waxyaabo badan oo faa'iido leh.
Habka maamulka iyo qiyaasta "Apimax" ee beeska
Faa'iidada ee apiary waxay ku xiran tahay caafimaadka beeska. Daryeelka beeyaalku marnaba iloobin tallaabooyinka ka hortagga iyo mararka qaarkood waxay ku buufinayaan apiary iyadoo diyaarin lagu kalsoonaan karo. Aad u cadeeysid "Apimaks" - miro ammaan ah oo wax ku ool ah, ka takhalusidda cudurrada iyo dulin. Faahfaahinta iyo sii-deynta foomka beedka shimbirta Apimax Balsam waa nadaafad gaar ah oo u adeegta daaweynta iyo ka hortagga fungal iyo bakteeriyada cudurada ee bees iyo Nozematosis.
Waa maxay soo saaraha malabku?
Medogonka - qalab muhiima oo ku yaala apiary. Mashruucani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka hesho malab cusub malab. Maqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay sida medogonki yihiin, sida loo isticmaalo iyo sida loo doorto in aan lagu qaldamin. Isticmaalka wax soo saaraha malab ee beekeeping.Khul beel kasta wuxuu u baahan yahay wax soo saaraha malab, sababtoo ah malab soo ururiyey by bees waa in laga helaa malabyo xiran.
Sidaad u samaysan lahayd Danny Dadan adigu
Ku dhowaad dhammaan beeraleyda hiwaayadda ah waxay isticmaalaan rugta naqshadaynta ama isbedelka. Magaca guriga shinni waxaa lagu sharfay Charles Dadan - oo ah beekhaamiye Faransiis ah, isagoo isticmaalaya horumarin horumarineed waqtigiisa, waxa uu abuuray naqshad naqshad leh hal nadiif ah oo jirka ah oo leh 11 qaybood oo waaweyn iyo dukaamo badan.
Sida loo sameeyo qalab badan oo gacmahaaga ah
Maanta, ma aha wax adag in la helo rugta multihull diyaar. Naqshad noocan oo kale ah ayaa laga iibsan karaa dukaamo kasta oo ku takhasusay iibinta qalabka kaydsiga. Laakiin haddii aad rabto inaad lacag kaydsato isla markaana isla markaaba garatid kartidaada kartidaada, markaa waxaad samayn kartaa rugta la midka ah ee gacmahaaga.
Sida loo abuuro shinni ee finan yaryar
Haysashada shinni-xayawaan badan ayaa ah arrin kaliya oo loogu talagalay beekhaamiye xirfad leh. Habkani waa mid la door bido sababtoo ah shaqadiisa. Ka dib oo dhan, wax soo saarka ee malab sii kordhaya by 3 jeer. Aan aragno sababta. Qaababka Naqshadda Noocaan noocan ah ee rugta ayaa la samayn karaa si madax-bannaan.
Maxay beeyaalku u doorbidaan cayayaanka caadiga ah?
Waxay u egtahay, waa maxay isticmaalka haramaha sunta ah, taas oo aan ku habbooneyn xitaa xayawaanka xayawaanka? Laakiin maya - dabiiciga ah, wax walbaa wuxuu leeyahay codsigiisa. Iyo bruise caadi ah, taas oo ah mid aad u jecel beekeepers, mar kale xaqiijin this. Tilmaamaha Botanical Warshadda labadlaha ah ee aan qabin waxa laga arki karaa labadaba xagasha bidixda iyo waddooyinka waddooyinka, labadaba dhiiqada dhagaxa, iyo qashinka qashinka.
Kansar malab weyn leh gacmahaaga
Si aad u soo saaro malab, waxaad u baahan tahay qalab gaar ah - soo saaraha malab. Qiimaha qalabka noocan oo kale ah maaha mid hooseeya, sidaa daraadeed qof waliba ma iibsan karo. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa sida loo sameeyo wax soo saaraha malab leh gacmahaaga. Sidee u shaqeysaa? Honey waxaa lagu baddalay ficilka xoogga saadaalinta. Tani waxay dhacdaa sida soo socota: malabku wuxuu ku daabacaa mindi gaar ah; markaa waxaa la geliyaa qalabka wax lagu duubo ee hareeraysan muddada geedi socodka; rotor rotates iyo malab waxaa lagu tuuraa dusha sare ee maaddada dhirta malab; kadibna waxay u socotaa hoosta iyo godka si loo miiro.
Honey, laga yaabee, waa mid ka mid ah hadiyadaha ugu qiimaha badan ee dabeecadda, kaas oo aadanaha muddo dheer la ogaa oo la qiimeeyay. Beekeeping waa xirfad u baahan in aqoon gaar ah oo ku saabsan shinnida malab (ka dib oo dhan, shinni kasta ma soo saaraan malab), ururinta shinni qoyska ah iyo xaalado raaxo leh noloshooda. Dhismaha shinnida malabka Meydka cayayaanka ayaa si siman u qaybsan saddex qaybood oo waaweyn: madaxa, laabta iyo caloosha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beekeeping 2020